वामदेव : सांसद निश्चित, मन्त्री अझै अनिश्चत - Karnalipatra
काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सांसदमा मनोनीतका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको बैठकले गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गरिने कोटामा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शुरोजंग पाण्डे लेख्छन, अब गौतमलाई सांसद बन्न राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने र शपथ लिने दुई प्राविधिक औपचारिकता मात्रै बाँकी छन् । नेकपाको १८ भदौको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने १४ फागुनको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिएपछि गौतमको सिफारिसलाई लिएर चासो थियो ।
१५ भदौमा गौतम आफैँले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर पार्टी निर्णयअनुसार आफूलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन माग गरेका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिएपछि गत फागुनदेखि नै राष्ट्रिय सभामा एक सिट खाली छ । त्यही रिक्त सिटमा गौतमको नाम सिफारिस भएको हो ।
गौतमलाई गत १४ फागुनमा नेकपाको सचिवालय बैठकले राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभाको सांसदमा सिफारिसका लागि सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्री ओलीको योजनाका कारण ६ महिनासम्म सचिवालय निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । गत १८ भदौको सचिवालय बैठकमा भने ओलीले आफू गौतमलाई सिफारिस गर्ने पक्षमा रहेको जानकारी गराएको एघार दिनपछि मात्र उनले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरेका छन् ।
पार्टी एकता बचाउन ‘मध्यमार्गी’ भूमिका खेलेको र पार्टी तथा मुलुकका लागि महत्वपूर्ण योगदान गरेको भन्दै अध्यक्ष ओली र प्रचण्डका साथै वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायत गौतमलाई मनोनीत सांसद बनाउने समझदारीमा पुगेका थिए । पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेर विभाजनको डिलमा पुगेको वेला गौतमले गत १३ साउनको स्थायी कमिटी बैठकमा ६बुँदे मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेर समाधानको कोसिस गरेका थिए ।
डोल्पा हुँदै काठमाडौं– ७ सम्मको कोसिस असफल भएपछि उनले गत १८ पुसमा बसेको सचिवालय बैठकमा भने प्रधानमन्त्री बन्ने सर्तमा मात्र राष्ट्रिय सभामा जाने प्रस्ताव गरेपछि बैठकले सर्त अस्वीकार गरेको थियो । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भने पार्टी निर्णयअनुसार गण्डकी प्रदेशबाट उम्मेदवार बनेका थिए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य बने पनि गौतमलाई मन्त्री बन्न भने त्यति सहज छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक जटिलतासम्बन्धी विवाद देखाएर गौतमलाई मन्त्री बनाउन अनिच्छा व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेको व्यक्ति मन्त्री हुन पाउने वा नपाउने भन्नेमा राजनीतिक र संवैधानिक मामलाका जानकारहरूको एक मत छैन । गौतम ०७४ को प्रतिनिधिसभामा बर्दिया २ बाट पराजित भएका थिए । गौतमले सार्वजनिक रूपमै आफू सरकारमा सहभागी हुनकै लागि सांसद बन्न लागेको प्रस्ट संकेत गर्दै आएका छन् ।
तर, अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायत भने गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठ दुवैलाई सरकारमा मन्त्री बनाउने पक्षमा छन् । सांसद नबनेको अवस्थामा मात्र मन्त्री बनाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफलमा प्रचण्डले गौतम र श्रेष्ठ दुवैलाई मन्त्री बनाउँदा सरकार बलियो बन्न सक्ने बताइसकेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीको अनिच्छा र अडान कायम रहँदा प्रचण्ड र नेपालको चाहनामा मात्र गौतम र श्रेष्ठ दुवै मन्त्री बन्ने सम्भावना कम छ । किनभने संसदीय व्यवस्थामा मन्त्री छान्ने कुरालाई प्रधानमन्त्रीको रोजाइ र योजनालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने अरू नेताहरूको बाध्यता हुन्छ ।
खतिवडाको राजीनामापछि अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैँले राखेका छन् । निकट भविष्यमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा प्रधानमन्त्री ओलीले कसलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन्छन् भन्ने सबैको चासो छ । गौतमसँगै सचिवालय सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठ पनि राम्रो जिम्मेवारी पाए सरकारमा जाने मनस्थितिमा छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले आन्तरिक हवाई उडान र लामो दूरीको अन्तरजिल्ला यातायात सेवा खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । गत १२ चैतबाट बन्द दुवै सेवा करिब ६ महिनापछि खुला गर्न लागिएको हो । ती दुवै सेवा खोलिए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तय गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पूर्ण रूपमा लागू हुने एक मन्त्रीले बताए । हवाई उडान सञ्चालनका लागि त्रिभुवन विमानस्थलले स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्ने गरी विभिन्न तयारी गर्दै आएको छ ।